Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Qatar Airways nwere nkeji iri na ise nke ụgbọ elu Airbus A350 ya
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Qatar Airways na -agba otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụgbọ elu Airbus A350 ya
Qatar Airways na -atụ anya na Airbus guzobere ihe kpatara ya wee mezie ọnọdụ dị n'okpuru ruo afọ ojuju nke Qatar Airways na onye nhazi anyị tupu anyị ebuga ụgbọ elu A350 ọzọ.
Nchedo na nchekwa nke ndị njem ya ka bụ ihe kacha ebute Qatar Airways.
Qatar Airways na -arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbazinye ego niile nke ala A350 a metụtara.
Qatar Airways emeela ihe iji weghachi ụgbọ elu A330 ya n'ọrụ.
Na mgbakwunye na nyocha ya oge niile iji hụ na nchekwa na nchekwa nke ndị njem na ụgbọ elu ya, Qatar Airways na -aga n'ihu na -enyocha ọnọdụ dị mkpa n'ofe ya Airbus A350 ụgbọ mmiri nke elu fuselage dị n'okpuru agba na -emebi na ọnụego ngwa ngwa. Ụgbọ elu ahụ na -arụ ọrụ na onye na -ahụ maka ya iji hụ na nchekwa nke ndị njem niile na nke a, na ịgbaso ntuziaka edere edere nke onye na -ahụ maka ya, ụgbọ elu iri na atọ abatala ugbu a, na -ewepụ ha nke ọma site na ọrụ ruo oge dị ka ihe kpatara ya nwere ike. guzobe ma nyekwa azịza ga -eju afọ iji mezie ọnọdụ dị n'okpuru.
Nchedo na nchekwa nke ndị njem ya ka bụ ihe kacha ebute Qatar Airways. Ụgbọ elu ahụ ga -eme ihe niile o nwere ike ime iji hụ na ndị njem ya enweghị nsogbu site n'iwepụ mwepụ nke ụgbọ elu ndị a n'ọrụ, ha ga -agba mbọ ịchọta ụzọ ọzọ iji nye ndị njem niile ọkwa dị elu. Qatar Airways emeela ihe iji weghachi ụgbọ elu A330 ya n'ọrụ ozugbo ọ ga -akwụsị ụfọdụ mmetụta nke ụgbọ elu A350 gbadara ala ma na -elekwa anya ugbu a na ngwọta ndị ọzọ.
Na mgbakwunye na nlebara anya ụgbọ elu ahụ na ichekwa aha ya maka ịnye ọkwa dị elu nke ahụmịhe ndị ahịa, Qatar Airways na -arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbazinye niile nke ala A350 a metụtara bụ ndị malitere inyocha ụgbọ elu ha emetụta.
Onye isi ụlọ ọrụ Qatar Airways, Maazị Akbar Al Baker kwuru, sị: “Site na mmepe ọhụrụ a, anyị ji ezi obi na -atụ anya na Airbus ga -elebara okwu a anya nke ọma. Qatar Airways agaghị anabata ihe ọ bụla ọzọ karịa ụgbọ elu na -aga n'ihu na -enye ndị ahịa ya ụkpụrụ nchekwa kachasị mma yana ahụmịhe njem kacha mma ha kwesịrị. Qatar Airways na -atụ anya na Airbus guzobere ihe kpatara ya wee dozie ọnọdụ dị n'okpuru ruo afọ ojuju nke Qatar Airways na onye na -achịkwa anyị tupu anyị ebuga ụgbọ elu A350 ọ bụla. "